Sawirro: Alshabaab oo xoojiyey qaraxyada lagu xiro gaadiidka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Alshabaab ayaa wax ka badelay qaraxyada ay ku xiraan gaadiidka dadka ay beegsanayaan, waxeyna kor u qaadeen awooda qarax ee qalabka ay gaadiidka ku xiraan.
Qaraxyadii Alshabaab ku xiri jireen gaadiidka dadka ay doonayaan iney dilaan ee magaalada Muqdisho ayaa inta badan dili jiray ama dhaawici jiray darawalka gaariga, hase ahaatee waxaa hadda soo kordhay in gaariga oo dhan uu holcayo, islamarkaana ay adagtahay in laga badbaado.
Shalay waxaa sarkaal ka tirsan Waaxda Socdaalka, gaar ahaan qeybta Garoonka Aadan Cadde uu gaari uu watay kula qarxay Wadada Maka Almukarrama, waxaana gaarigaas qabsaday dab xoog leh, dhamaantiis ayaan gubtay.
Inkastoo sarkaalka watay gaarigaas oo la oran jira Mukhtaar Dheere iyo qof kale oo la saarnaa si dhib badan looga saaray gaariga, haddana gaariga ayaa bas beelaby. labada qof ee gaariga la socday ayaa dhaawac u dhintay.
Gaadiidka ay haleelaan qaraxyada Alshabaab ku xiraan ayaa waxey inta badan ka burburi jireen kursiga darwalka, muraayadda hore iyo qeybo kale oo aan badneyn.
Khubarada wax ka yaqaana qaraxyada ayaa rumeysan in Alshabaab kordhiyeen waxyaabaha kiimikada ah ee ay qaraxyada u adeegsadaan. Qaraxyada lagu xiro gaadiidka ayaa ugu soo badanaya Muqdisho.